राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सुरु हुनु अघि जयन्त चन्द समूहले किन छाड्यो राप्रपा ? – Himalitimes
राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सुरु हुनु अघि जयन्त चन्द समूहले किन छाड्यो राप्रपा ?
२०७५ फाल्गुन ११ २१:५० मा प्रकाशित
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री जयन्त चन्दसहित १८ नेताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) परित्याग गरेका छन् । संगठन सुदृढिकरणका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सुरु हुनु चार दिन अघि चन्दसहितका नेताहरुले राप्रपाबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन् ।
राप्रपाबाट अलग भएको घोषणा गर्नेहरुको सूचीमा चन्दको नाम पहिलो नम्बरमा छ । उनी चन्द पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा हुन् । उनीसँगै भरत पाठक, भरत गिरि, प्रल्हाल साह, दिनेश श्रेष्ठ गोविन्द खनियाले पनि पार्टी छाडेका छन् । सानुकाजी हेक्का, चिरागमानसिँह कुँवर, रिता पोखरेल, सुन्दर खड्का, गणेशबहादुर बिष्ट, गजेन्द्रबहादुर सिँह, बिन्दा गिरि, भरतबहादुर चन्द, गोपाल दाहाल, गणेश चन्द, मुकुन्द कार्की र पूर्ण चौलागाईंले पनि राप्रपा परित्याग गरेका छन् ।
राप्रपा छोड्नुको कारणा भने खुलाईएको छैन, केही दिनमा नै भावी योजना सार्वजनिक गरिनेछ । प्राप्त जानकारी अनुसार यो समूहले पछिल्लो समय तीन वटै राप्रपा -कमल थापा, पशुपति शम्शेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनी) मिल्नुपर्ने दबाव दिँदै आएको थियो ।
अत्तरियाका कप्तान दिपेन्द्रले पाए सुनको जुत्ता
सार्क क्षयरोगमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरण: बस्नेतको दादागिरी कायमै